ပဲဟင်းကတော့ bean ကိုရည်ညွှန်းသည်, ဗီတာမင် B နှင့်အခြားအာဟာရဓာတ်များစွာရှိပါတယ်။ ဒီထုတ်ကုန်များစွာကိုအရသာဟင်းလျာများချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့ multivarka အတွက်ပဲဟင်းချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။
အညိုရောင်ပဲဟင်း -2multistakana;
ရေ -3multistakana;
ကြက်သွန်ဖြူ - 2-3 လေးညှင်းပွင့;
ဆား - မြည်းစမ်းရန်,
ပဲဟင်းချက်ပြုတ်၏ဟင်းလျာများ multivarka အတွက်အပျော်အပါးဖြစ်ပါသည် - ယခင်ကရန်မလိုအပ်ခဲ့ပါဘူးကြောင့်စုပ်ယူထားသည်။ ရုံ, ဆေးကြောပါပြီနောက်ဟင်းထဲမှာထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ရေ၌လောင်း။ ကျနော်တို့ပဲဟင်းနှင့်နီးစပ် multivarku ကထား, ထိုကြက်သွန်ဖြူကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်။ သည် "Buckwheat" mode မှာမိနစ် 30 ချက်ပြုတ်။ လုပ်နိုင်သောဆန်ကြက်သွန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီကြော်နှင့် zazharku ပြီးဆုံးနှင့်အတူရောမွှေ သီးနှံပဲဟင်း ။
အသား multivarka နှင့်အတူကြော်ပဲဟင်း
ပျော့ဖတ်ဝက်သား - 300 ဂရမ်;
အနီရောင်ပဲဟင်း - 1 ခွက်ကို;
ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် -2tbsp ။ ဇွန်း,
အချဉ်မုန့် -3tbsp ။ ဇွန်း,
ရေ -2ခွက်,
ဆား, နံ့သာမျိုးကို - ကိုမြည်းစမ်းဖို့။
ကိုရီးယားမုန်လာဥများအတွက်ကြမ်း grater သို့မဟုတ် grater အပေါ်သုံးမုန်လာဥ, အသားသေးငယ်တဲ့အပိုင်းပိုင်းသို့ခုတ်ဖြတ်။ အဆိုပါပန်းကန် Multivarki အသားတင်သော, မုန်လာဥနီ, ပဲဟင်းကိုဆေးကြော ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် ကိုရေလောင်း, ကောင်းစွာရောနှောနှင့်အချဉ်မုန့်။ 1 နာရီမိနစ် 30 ပြင်ဆင်နေ "သတ်" mode မှာ။ ချက်ချင်းဖလားထဲသို့ပြိုကွဲခြင်းနှင့်အစေခံရန်အသားနှင့်အတူပဲဟင်း multivarka အဆင်သင့်။
ပဲဟင်း -2multistakana;
ရေ -4multistakana;
beetroot - 1 pc; ။
ဆား, နံ့သာမျိုးကို - ကိုမြည်းစမ်းရန်,
တစ်ဦးကြမ်း grater, Cube သို့ကြက်သွန်ဖြတ်အပေါ်မုန်လာဥနီနှင့် beets သုံး။ Multivarki မှာတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီဒယ်အိုးလောင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အ7မိနစ်ပြင်ဆင်နေ "ကြော်" mode ကိုပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ အဆိုပါပဲဟင်းကိုလျှော်သည့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားဖို့ကသွန်းလောင်း။ ဆား, ရေကိုမြည်းစမ်းနဲ့ငါသွန်းလောင်းရန်နံ့သာမျိုးကိုထည့်ပါ။ ကောင်းပြီလူအပေါင်းတို့သည်လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားနှငျ့ "ဟင်းချက် Express ကို" တွင် 40 မိနစ်ချက်ပြုတ်။ ထိုကဲ့သို့သော program တစ်ခုမလျှင်, "buckwheat" mode ကိုပြင်ဆင်ပါ။ ပူပြင်းတဲ့စားပွဲပေါ်မှာမှပဲဟင်းနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ။
ပဲဟင်း - 1 multistakan;
အာလူး -3PCs; ။
ဟင်းရည် - 1 လီတာ;
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်, ဆား, နံနံ - မြည်းစမ်းဖို့။
Cube သို့ဖြတ်အာလူး, ထုတစ်ဦး grater အပေါ်သုံး, မုန်လာဥနီကြက်သွန်ပြိုလဲသွားပြီ။ Multivarki တွင် "မုန့်ဖုတ်" mode မှာကြက်သွန်ကြော်ပျံ့နှံ့5မိနစ်, ဟင်းရွက်ဆီဒယ်အိုးသွန်းလောင်း။ ထိုအခါမုန်လာဥ add နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ 10 မိနစ်ပြင်ဆင်လော့။
ထို့နောက်ဒယ်အိုးထဲမှာ Multivarki, အလိုက်သည်ကိုအာလူးထားပဲဟင်းကိုဆေးကြောခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာရောမွှေပါ။ နံ့သာမျိုးနှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရွက်အရသာအတွက်ဆားထည့်ခြင်း, ရေသို့မဟုတ်ဟင်းရည်ကိုလောင်း။ ကို "သတ်" mode မှာ 1 နာရီများအတွက်ချက်ပြုတ်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမတိုင်မီ5မိနစ်အဘို့အစာနယ်ဇင်းရှောက်သွားအမှုန့်ဟင်းချိုနံနံခြင်းနှင့်ကြက်သွန်ဖြူထဲမှာထည့်သွင်းထားသည်။
အစိမ်းရောင်ပဲဟင်း - 1 ခွက်ကို;
အနီရောင်ပဲဟင်း - 0.5 ခွက်;
ကြက်သား - 700 ဂရမ်;
မုန္လာဥနီ - 300 ဂရမ်;
ကြီးမားတဲ့ခရမ်းချဉ်သီး - 1 pc; ။
ချိုမြိန်ငရုတ်ကောင်း - 1 pc; ။
ရေ -3ခွက်;
chives - 1 ရောင်ခြည်;
ဇီယာစေ့ - 30 ဂရမ်,
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ - 30 ml ။
မုန်လာဥနီစင်ကြယ်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးကြမ်း grater အပေါ်သုံး။ ကြက်သားအသေးကိုအပိုင်းပိုင်းခုတ်ဖြတ်သို့။ အဆိုပါခွက်ကို Multivarki ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီလောင်းမုန္လာဥနီ "ကြော်" mode ကိုသို့မဟုတ် "မုန့်ဖုတ်" 10 မိနစ်ချက်ပြုတ်၌အိပ်။ ထိုအခါကြက်သားကိုအပိုင်းပိုင်းထုတ် တင်. ကြောင့်အရောင်ပြောင်းလဲသည်အထိချက်ပြုတ်, သည်, အဖြူအဖြစ်ပြောင်းသွားသည်။ ဒါကြောင့်ရွှေသည်အထိမလိုအပ်ပါဘူးဆောင်ခဲ့ရမည်။ အဆိုပါ diced ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ငရုတ်ကောင်း Add ရောထွေးနှင့် 10 ကိုပိုမိုမိနစ်ချက်ပြုတ်, ထို့နောက်ပဲဟင်းကိုပြန့်ပွားများကိုဆေးကြောပြီးလျှင်, ဆား, နံ့သာမျိုးကို add ပြီး "pilaf" mode ကိုကွိုတငျပွငျဆငျမြည်းစမ်း။ အဆင်သင့်ကြက်သားနှင့်အတူပဲဟင်းနှင့်ကုန်တယ်အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီနှင့်ဇီယာစေ့နှင့်အတူဖြန်း။
Multivarka ထဲမှာ Apple pie - အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အရသာချက်ပြုတ်နည်းများမွှေး pastries
Braised ဝက်သား multivarka
Multivarka အတွက် Belyashi
Multivarka အတွက်ကြက်သားနှင့်အတူ risotto ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Multivarka အတွက် minced အသားနှင့်အတူအာလူး casserole
Multivarka အတွက်မီးဖုတ်ထားသောအာလူး - တစ်ဦးချင်းစီသည်နေ့ရက်သည်ပုံမှန်မဟုတ်သောအတွေးအခေါ်များရိုးရှင်းတဲ့ဟင်း!
54 နှစ်အရွယ် George Clooney မကြာမီဖခင်တစ်ဦးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
Multivarki ဖုံးအုပ် - Teflon သို့မဟုတ်ကြွေ?
Paracetamol ကူညီပေးသည်သောအရာကို မှစ. ?
6 လပုလင်း-အောင်ကျွေးအတွက်ကလေးသူငယ် menu ကို
အဆိုပါပြောသောအပေါ်ပတ္ dial ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် running အစီအစဉ်ကို